यस्तो हुनेछ संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय – तहल्काखबर
काठमाडौँ / संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ । तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ ?
संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ। तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक महिना लामो छलफलपछि संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एउटा छुट्टै इकाई रहनेछ। मलेसियाको इम्प्लिमेन्टेसन कोअर्डिनेसन युनिट र भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रोजेक्ट मनिटरिङ युनिट (पीएमयू) कै स्वरूपमा त्यस्तो इकाई राख्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ। जसबाट विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला परियोजना अनुगमन प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसबाहेक परराष्ट्र मामिला हेर्न परराष्ट्र इकाई पनि रहनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिन बेग्लै सुरक्षा इकाई पनि रहनेछ। त्यसको नेतृत्व सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन्। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीलाई सीधै ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने गरी गुप्तचर इकाईको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संरचनामा कर्मचारी प्रशासन हेर्न एउटा बेग्लै विभाग रहनेछ।
मन्त्रिपरिषदको कामकारबाही र प्रशासनिक काम हेर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटदेखि सल्लाह–सुझाव सबैमा सहयोग पुर्‍याउन राजनीतिक सल्लाहकारसहितको निजी सचिवालयलाई दह्रो बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया र भारतको शासन पद्धतिलाई आधार बनाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। ती मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कर्मचारीलाई तुलनात्मक हिसाबले सक्षम मानिन्छन्।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित समन्वयको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि मन्त्रालयहरूबीच मात्र समन्वय गरे पुग्थ्यो। अब भने तीन तहको सरकारबीच पनि प्रत्यक्ष समन्वय गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि छ। त्यसबाहेक निर्वाचित सरकारका प्रमुखका रूपमा आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीमाथि रहन्छ। नयाँ राजनीतिक प्रणाली र नयाँ परिवेशका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना छरितो, समन्वयकारी र बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् पूर्वप्रशासकहरू।
हिजो एकात्मक राज्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सर्वेसर्वा हुने गरेकामा मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अधिकारहरू निक्षेपित भइसकेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम गर्ने तौरतरिका नै फरक हुनुपर्ने पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाको धारणा छ। ‘समय–समयसम्म संविधानमा भएका अधिकारलाई लिएर स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच विवाद र कलह हुन सक्ने भएकाले समन्वयकारी ढंगले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसबाहेक परराष्ट्र, आन्तरिक सुरक्षा र असल आर्थिक नीतिमा प्रभावकारी काम गर्न सक्ने किसिमको संरचना बनाउनुपर्ने कोइरालाको जिकिर छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्थायी संरचना र आवश्यक जनशक्ति केन्द्रमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्या यकिन भएपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ। पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबाहेक नयाँ बन्ने सरकारबाट तर्जुमा हुने कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले पनि प्रम कार्यालयको संरचना र अधिकार निश्चित गर्नेछ।
‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुँदा अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रमुख लक्ष्य हो, त्यसकै लागि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने।
निकाय : प्रमुख भूमिका
सुरक्षा इकाई– राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा सल्लाह
विद्यार्थीलाई ह्वीलचियर वितरण